कोरोनाले विश्व नै थलिएको बेला २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले बढ्ने | Online Nepal
कोरोनाले विश्व नै थलिएको बेला २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले बढ्ने
एजेन्सी। कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा द्रुत गिरावट देखिएको छ।
करोडौं मानिसहरूले या त आफ्नो जागिर गुमाएका छन् वा आफ्नो आय गुमाएका छन्।
सरकारहरूले अर्थव्यवस्थामा भएको नोक्सानी रोक्न अर्बौ डलर लगानी गरिरहेका छन्। यद्यपि २०२१ मा आर्थिक पुन: प्राप्ति अझै धेरै अनिश्चित छ। प्रारम्भिक अनुमानका अनुसार चीनको अर्थव्यवस्था फेरि मजबुत रूपमा बृद्धि हुन थालेको छ।
तर, विश्वका धेरै धनी देशहरूका लागि, २०२२ सम्ममा पूर्ण पुनःप्राप्ति हुन गाह्रो हुन सक्छ। गैर-समानता पनि ठूलो मात्रामा बढ्दैछ। ६५१ अमेरिकी अर्बपतिहरुको कुल सम्पत्ति ३० प्रतिशतले वृद्धि भई4लाख करोड डलर पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख देशहरूमा २५ मिलियन मानिसहरूले अत्यन्तै गरिबीको सामना गर्न सक्दछन् । आजीविकाको साधन गुमाइसकेको छ।
महामारीलाई रोक्ने गतिले विश्वभरिका अर्थतन्त्रहरूको प्रदर्शनमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
कोरोना भाइरस र भ्याक्सिन दौडको नयाँ ताना बीच द्रुत जीतको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यद्यपि धनी देशहरूले धेरैजसो उपलब्ध खोपहरू अधिग्रहण गरिसकेका भए पनि, २०२१ को अन्त्यसम्म उनीहरू प्रतिरोध क्षमताका लागि पर्याप्त व्यक्तिहरूसम्म पुग्न सम्भव नहुन सक्छ। विकासोन्मुख देशहरूमा खोपको आपूर्ति सामान्यतया कम हुन्छ, त्यस्तै यी स्थानहरूमा भाइरस अझ छिटो फैलिनेछ।
जित्ने देशहरू !
यस अवस्थामा चीन र दक्षिण कोरिया ठूला जित्ने देशहरूमध्ये हुनसक्छन्। यी ती देशहरू हुन् जुन कोभिड -१९ लाई सुरुमा दबाउन सफल भए। २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले बढ्न सक्छ।
यस अर्थमा, महामारीको अगाडि विश्वको सबैभन्दा सफल पश्चिमी देशहरूको तुलनामा चीनको विकास दर दोगुना भन्दा बढी हुन सक्छ। चीनको अर्थतन्त्रले धेरै हदसम्म निर्यातमा निर्भर पश्चिमी देशहरुमा बन्दको कारण लाभान्वित भएको छ। पश्चिमी देशहरूमा मनोरन्जन र यात्रा जस्ता सेवाहरूको माग घट्न सक्छ।
यद्यपि उनीहरूको घरेलु सामान र मेडिकल आपूर्तिको माग बढेको छ। साथै, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च ट्यारिफको बाबजुद पनि चीनबाट अमेरिकाको निर्यात रेकर्ड तहसम्म पुगेको छ। चीनले एशियामा पनि आफ्नो आर्थिक प्रभाव बढाइरहेको छ।
चीन प्रशान्त मा एक नयाँ स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र हावी छ र युरोप देखि अफ्रिकाको यसको व्यापार मार्गहरुको वरिपरि भारी पूर्वाधार परियोजनाहरु छन्। धनी देशहरू अमेरिका, ब्रिटेन र कन्टिनेन्टल यूरोपको दृष्टिकोण खासै राम्रो छैन। कोरोनाको दोस्रो छाल र लकडाउन यसको कारणहरू हुन्।
उदाहरणका लागि, महामारीले अमेरिकामा रोजगार र आय बृद्धिमा गहिरो प्रभाव गरेको छ।
यद्यपि २०२१ मा विकासोन्मुख देशहरूले सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्नुपर्नेछ। यी देशहरूसँग पर्याप्त खोपहरू किन्न वित्तीय स्रोत पनि छैन र तिनीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली त्यस्तो छैन कि उनीहरूले संक्रमित व्यक्तिहरूको ठूलो संख्यामा उपचार गर्न सक्दछन्।
साथै यी देशहरूले ठूलो सरकारी अनुदान दिन सक्दैनन् ताकि युरोप र अमेरिकाको तर्फबाट ठूलो मात्रामा बेरोजगारी रोक्न सकियोस्। पश्चिमी देशहरूको सुस्तताका कारण यी विकासोन्मुख देशहरू र धनी देशहरूको कच्चा पदार्थको माग उनीहरूमाथि छ।
ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका जस्ता द्रुत रूपमा विकास भइरहेको देशहरू पनि यी खराब अवस्थाबाट बाहिर जान सजिलो देखिदैन ।
विश्वलाई नै कोरोनासँग भिडाएर चन्द्रमामा माटो परीक्षण गर्दै चीन
कोरोनाको उत्पत्ति पत्ता लगाउन डब्ल्यूएचओको टोली चीन जाँदै, सहयोग गर्ला चीनले ?
चीनले आफ्ना नागरिकलाई गोप्य रूपमा कोरोना खोप लगायो, सुचना ‘लिक’ गरे कारवाहीको चेतावनी
एकजना संक्रमित भेटिएपछि शहरका ४७ लाखको कोरोना परीक्षण
चीनमा कोरोनापछि अर्को खतरनाक भाइरस भेटियो ,सयौं मानिस बिरामी
चीनले बनाएकाे कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको पेटेन्टले पायाे स्वीकृति
कोरोनाको त्रास बढेसँगै चीनमा फेरि लकडाउन
कोरोना चीनविश्व अर्थतन्त्र